White Hat Monsters nke SEO | Martech Zone
Ọ dị mma mgbe niile ịhụ ụfọdụ ọchị na ụfọdụ infographics. Ọ na-atọkarị ụtọ ịhụ ndị nọ na ụlọ ọrụ na-ebugharị omume SEO. Ekwuola m ya SEO anwuola na infographic a na-ekwu okwu na udiozi. Ihe bụ eziokwu bụ na ọ bụrụ na ị nwere usoro ikpo okwu siri ike nke na-ewepụta ọdịnaya gị n'ụzọ kwesịrị ekwesị, SEO bụ akụkụ dị mfe nke akụkụ ahụ… akụkụ siri ike bụ ide ihe ndị na-akpali akpali nke ndị na-ege gị ntị ga-eso
Ihe omuma ihe omuma a sitere na Smuggecko na-ezo aka na ihe obula… aka ndi mọnk… na usoro SEO gi na otu ha si aru oru iji hụ na ọdịnaya gi kacha mma.
Tags: infographicseo infographicseo ogologo anụokpu ọchaacha ọcha okpu seoacha ọcha
Jul 3, 2012 na 12:23 PM
Ọ dị mma ịhụ ndị mmadụ na-ekpori ndụ infographic a. Enwere m obi ụtọ dị ukwuu na-eme ya. E nwere ihe ọzọ na ụzọ ya nke na-ele akụkụ ọjọọ nke SEO anya.
Jul 3, 2012 na 5:06 PM
Na-atụ anya ịhụ ihe ọjọọ, oke! Jide n'aka na ị gbakwunye nnukwu anụ ndị na-ere SEO mana ha na-agaghachi azụ na-amaghị ama na ndị ahịa. Ndị ahụ bụ ụmụ okorobịa ndị na-agba m ọkụ n’ezie!
Jul 3, 2012 na 7:18 PM
M ga-ekewapụta akwụkwọ ozi dịpụrụ adịpụ kpamkpam, nke a na-eche ihu na ịchọta ụlọ ọrụ SEO kwesịrị ekwesị. Mana nke ahụ bụ maka izu na-abịa 🙂
Sep 20, 2012 na 10:33 PM
Ngosipụta nke ụdị seo pụrụ iche. baara m ezigbo uru. ọmarịcha ọrụ.